हार्छु कि भन्ने डर लाग्यो प्लिज आफ्नै छोरा सम्झेर सेयर गरेर आसिर्बाद दिनुस भारतलाई जितेर फर्किन्छु ! सारेगमप’मा प्रितमको अर्को धमाकेदार प्रस्तुती, बरुण धवनले भने ‘कति ट्यालेन्ट तिमी’ (भिडियोसहित) — ''समर्पण मिडिया''
हार्छु कि भन्ने डर लाग्यो प्लिज आफ्नै छोरा सम्झेर सेयर गरेर आसिर्बाद दिनुस भारतलाई जितेर फर्किन्छु ! सारेगमप’मा प्रितमको अर्को धमाकेदार प्रस्तुती, बरुण धवनले भने ‘कति ट्यालेन्ट तिमी’ (भिडियोसहित)
१४, बैशाख २०७६
काठमाडौ. नेपालीहरुले सबैभन्दा धेरै सहभागिता जनाएको भारतकै चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो “सारेगमप लिटिल्चाम्स” मा नेपालका2बालकहरुले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्. उनीहरुले प्रतिनिधित्व पनि यसरी गरिरहेका छन् की भारतीय प्रतिष्पर्धीहरुलाई पनि कडा चुनौती दिईरहेका छन्. इटहरीका 11 बर्षीय प्रितम आचार्य र सिन्धुपाल्चोकका आयुष केसीले नेपालीहरुको मात्र होईन भारतीयहरुको पनि मन जित्दै अगाडी बढिरहेका छन्. आज प्रसारण भएको कार्यक्रममा प्रितम आचार्यले आफनो प्रस्तुती दिएका छन्.
चर्चित गायक कुमार सानु स्पेशल गरिएको कार्यक्रममा प्रितमले “मै खिलाडी तु अनाडी” फिल्ममा समाबेश गीत “चुराके दिल मेरा” गीत गाएका थिए. प्रितमले यो गीत यसरी खाए की भनीसाध्य छैन. कार्यक्रममा अतिथीको रुपमा आएक कलंक फिल्मका कलाकारहरु आएका थिए. जब प्रितमले गीत गाउँन थाले नायक बरुण धवन जुरुक जुरुक उठेका थिए. आलिया भट्ट र माधुरी दिक्षित प्रितमको गायनमा मन्त्रमुग्ध बने. पछिल्लो2एपिसोडमा प्रितमले सय प्रतिशत ल्याउन सकिरहेका थिएनन्. तर आजको प्रस्तुतीमा उनले धमाकेदार कमव्याक गर्दे सय प्रतिशत नम्बर ल्याए.
सोमा जुरीले दिएको यो नम्बर शोमा रहिरहनका लागि निकै जरुरी हुने गर्छ. जज तथा जुरी मेम्बरले प्रितमलाई स्ट्याण्डिङ ओभिएसन नै दिए भने जज अमाल मलिक त उनलाई थप प्रोत्साहन दिन स्टेजमै पुगेका थिए. भारतमा बिषेश गरी प्रितम “सन्देशे आते है” गीतबाट चर्चित बनेका थिए. उनले गाएको उक्त गीतको भिडियो बलिउडका चर्चित भन्दा चर्चित नायक तथा गायकहरुले समेत आफनो सामाजिक सञ्जाल एकाउण्टमा सेयर गर्दे प्रशंसा गरेका थिए ।
यो हप्ता “हकिने मन” का उत्कृष्ट १२ वटा मुक्तक
प्रमोदको नयाँ गीतमा टिकटकबाट हिट जुम्ल्याहा दिदिबहिनीसँग पल र प्रमोदको रोमान्स